WAX KA OGOW SHIRQOOLADA SOOMAALIYA LOO MALEEGAYO IYO SIYAASADAHA CUSUB EE KA SOCDA GEESKA AFRIKA | Salaan Media
WAX KA OGOW SHIRQOOLADA SOOMAALIYA LOO MALEEGAYO IYO SIYAASADAHA CUSUB EE KA SOCDA GEESKA AFRIKA
Madaxweynaha Jamhuuriyada Jabuuti Mudane Ismaaciil Cumar Geelle oo dhawaan la kulmay aqoonyahanno Soomaaliyeed oo shir uga qabsoomay magaalada Jabuuti, ayaa mar uu ka hadlayey siyaasadaha cusub ee ka socda Geeska Afrika waxa uu ku baraarujiyey halisaha Soomaalida kaga soo fool leh siyaasadaha cusub ee ka hillaacay Mandaqadda Geeska Afrika, waxaannu Madaxweyne Geelle uga digay dadka Soomaalida inay fiiro dheer u yeeshaan siyaasadaha cusub ee ka socda Geeska Afrika, isaga oo soo qaatay maahmaahda Soomaaliyeed ee ah; “Waan baahannahay looma bakhtiyo cuno.”
Haseyeeshee, warkii uu Madaxweynaha Jabuuti ka jeediyey shirkii lagu falanqeeyey arrimaha Geeska Afrika ayaa duulay (gaadhay Itoobiya), waana la soo qan-jiidhiyey, kadibna Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu hadalkiisii hore dhawaan ka daba tuuray ammaan uu ammaanayo siyaasadaha Ra’iisal-wasaare Abiy Axmed uu ka wado Geeska Afrika!
Dowladda Mareykanka oo hawlahan iyo siyaasadahan cusub ku badhi-taaraysa Ra’iisal-wasaaraha Ethiopia Mr.Abiy Axmed oo iyadu soo maleegtay waxan socda ayaa iyana Jabuuti ku tuurtay oo tageertay Shirkadda DP World oo uu muran la xidhiidha maamulka Dekedda Dooraale ka dhexeeyo dowladda Jabuuti.
Haddaba su’aashu waxay tahay sidee ayuu noqon doonaa xaalka Geeska Afrika? Su’aal: “Alahayoow maxay noqon ninkii lacag siistay awrkiiii?”
Jawaab: “Dee, waxa uu ku guuro ayuu waayi doonaa.”
Hore ayaa loo yidhi; “Isticmaarku halka uu awr marin doono irbad ayuu ku dayaa.” Sannadkii 1995-kii ayaa ururka goboleedka IGADD loo beddelay IGAD oo dastuurkii laga beddelay oo dalka Eratariya (Eritrea) xubinimo la siiyey, iyada oo aanay Jamhuuriyaddiii Soomaaliyeed saxeexin, illeyn dowladi ma jirin waqtigaas’eh.iyadoo xiligaas Madaxweynehii hore ee dalka Mareykanka Bill Clinton la yimid mashruuc loo bixiyey The Grater Horn Initiative oo dalalka IGADD ku bahoobay lagu soo darayo dalalka Ruwandha (Rwanda) iyo Tanzaniya, iyadoo la caashaqsan yahay madaxda cusub ee kala ah;
Paul Kagame Madaxweynaha Rwanda,
Museveni oo ah Madaxweynaha Uganda,
Meles Zenawi Ex. Ra’iisal-wasaarihii Ethiopia iyo
Isaias Afwerki oo ah Madaxweynaha Eratariya
Waxa la rabay waqtigaas in dalalka Eratariya iyo Itoobiya oo iskaashanayaa ay qabtaan xeebta dheer iyo dalka Jamhuuriyadda Soomaaliyeed, ujeeddadu waxay doonto ha noqotee. Hindisahan waxa dabada ka riixayey Maamulkii Madaxweyne Clinton ee xisbiga Dimuqraadiga oo ceebi ka raacday askartii lagaga dilay magaalada Muqdisho iyo diyaaradihii laga soo riday ee meydkii duuliyaha la jiid jiiday waddooyinka Muqdisho; duuliye kalena lagaga qabtay. Aayadda 54-aad ee suuratul Alcimraan waxa uu Ilaahay ku yidhi; “Wa makaruu wa makara laahu wallahu khayru maakiriin.” Wax yar kadib waa kii dagaalku ka dhex-dillaacay labadii dal ee Itoobiya iyo Eratariya. Halkaas ayeyna ku dhimatay sheekadii ahayd in la qabsado xeebta Soomaaliya, halka Uganda iyo Rwanda iyana ay isku dhaceen, dabadeedtana way burburtay fikraddii Greater Horn Initiative ee uu hindisaheeda lahaa Maamulka Madaxweyne Clinton.
Hadda ayaa faylkii dib boodhka looga tumay, sababta u weyn ee hadda loo soo rogaal-celiyey waa cabsida Mareykanku ka qabo in dowladda Shiinuhu ay ku habsato Afrika, waana qayb ka mid ah dagaalka la xidhiidha tartanka ganacsiga ee ka dhexeeya dalalka Mareykanka iyo Shiinaha.
Sannadihii dambe, Shiinuhu waxa uu maalgelin mug leh ku sameeyey labada dal ee Itoobiya iyo Jabuuti oo lacag ballaayiin doollar ah geliyey waddooyin iyo tareenno, dekedo iyo wershado. Shiinuhu waxa uu Itoobiya ka soo saaray shidaal (Baatrool iyo Gaas), halka Jabuuti-na uu ka yagleelay saldhig ciidan, hawlahaas oo ay dowladda Mareykanku ka didday (sastay), dabadeedna waxa kacdoon dadweyne xukunka lagaga tuuray qoladii reer Tigreega ee dalka Itoobiya ku amar-ku-taaglaynaysay ilaa sannadkii 1991-kii, kadibna waxa soo baxay Ra’iisal-wasaare Abiy Axmed oo Oromo ah oo siyaasad cusub iyo war cusub la yimi!
Isaias Afwerki iyo Eratariya waa laga qaaqday cuno-qabatayntii ay saartay Qarammada Midoobay.
Dhulkii Itoobiya ka haysatay Isaias Afwerki iyo Eritrea waa looga kacay.
Markii la heshiisiiyey Itoobiya iyo Eratariya, waxa farta loogu yeedhay Madaxweyneha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulahi Farmaajo kaas oo oo ku daba faylay Abiy Axmed iyo Isaias Afwerki.
Mashruucan siyaasadda Geeska oo uu dirawal ka yahay Gacanyarihii hore ee Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Dowladda Mareykanka oo la yidhaahdo Ambassador Donald Yamamoto, kaasoo asal ahaan ka soo jeeda dalka Japan (khayr badan ma leh reer Japan oo biyo ku waraabinmaayaan, iyaga oo ahaa waddanka labaad ee dhaqaalaha dunida, haddana wax deeq ah ma bixiyaan oo qaxoonti ma qaabilaan). Ambassador Yamamoto oo horena safiir uga soo noqday Jamhuuriyadda Jabuuti iyo Itoobiya, haddana ah safiirka Mareykan ee Soomaaliya, xagee ayuu ku dambeyn doonaa? Ma kii ka horeeyey “Greater Horn Initiative,” ayuu raaci, mise wuu guulaysan doonaa. Bal adba!
Dalka Jabuuti, waxa lagu dirqiyayaa inay dekedda Dooraale ku celiso gacan-ku-hayntii Shirkadda DP World, isla markaana ay macasalaamayso Shiinaha. Itoobiya waxa la rabaa inay ciidamo geyso Soomaaliya marka ciidammada AMISOM waqtigoodu dhammaado sanadka marka uu yahay (2020), iyada (Itoobiya) iyo Eratariya-ba ay bustihiisa bannaanka u dhigaan Shiinaha. Dalka Itoobiya oo aan bad lahayn oo ciidamo badeed samaysanaysa. “Alla faan weynaa!! Xaggee ayey degayaan? Maxaa kuu baxay Bowee!!
Suurtagalnimada siyaasaddan cusub ee Gobolka Geeska Afrika, shaki weyn ayey leedahay, sida Madaxweyne Ismaaciil Geelle u sheegay in laga fiirsado ayey u baahan tahay.
Dhinaca kale xasiloonida Itoobiya far ayaa ku godan. Eratariya haddii dhulkeeda looga kaco, cuno-qabatayntiina laga qaaday dib u aamin mayso Itoobiya oo durba xadkii waa xidhay markii 27 kun oo reer Eratariya ihi u qaxeen Etoobiya oo magangelyo siyaasadeed weydiisteen oo iska diiwaangeliyeen Hay’adda UNHCR ee qaxootiga u qaabilsan Qarammada Midoobay.
Waxa Madaxweye Isaias Afwerki uu diiday in ciidammada badda ee ay Itoobiya yagleelayso ay dib ugu soo laabtaan dekedaha Eratariya, isaga oo ka shakisan reer Galbeedka waxa uu hoosta uga oggolaaday in Ruushku uu soo dego xeebaha dalkiisa.
Ugu dambayntii waxaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan madaxdooda la gudboon in ay taxadar muujiyaan il gaar ahna ku hayaan shirqoolada socda ee la xiriira siyaasadaha cusub ee ka socda Geeska Afrika.
“Waa lays qayaanaynayaa soomaali qaarow eh
Qosol been ah fool wada qayaxan, qiil aan garanaayo,
Booraan afkii laga qafilay qabarna hooseeyo
Doqon baa halkii lagu qatali, qoorta soo dhigan’eh
Maanaa midiyo lay qarshaa laygu qalidoono”
Abwaan Faarax Nuur Wacays
Qalinkii: Dr Maxamed Saciid Gees.